February 13, 2020 – မြန်မာသတင်းစုံ
ခဈြသူမြားနေ့ (V DAY) အတှကျ သတိပေးစာ
ညီမလေး ……. ခဏတာ သာယာမှု အတွက် တစ်ဘဝစာ ထိမ်းသိမ်း လာတဲ့ အပျိုစင် ဘဝကို ချောကလက်နဲ့ လဲမစား လိုက်နဲ့နော် ။ အပျိုစင် ဆိုတာ အလွယ်တကူ တိုင်းတာလို့ ရတဲ့ ကိရိယာ မရှိဘူး ဆိုပေမယ့် တစ်ဘဝစာ တော့ လိပ်ပြာလုံ မှာ မဟုတ်ပါ။ အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှု ကို အားကျမိ ရင်တော့ အနောက်တိုင်း လို ကိုတို့ နိူင်ငံက လက်မခံ တတ်ကြ ဘူးလေ။လူ့ သဘာဝက Read more
မွငျးခွံမှာ လောငျပွနျပွီ 😢….(ရုပျသံ) မီးသတျယာဉျ(၁၂)စီး ဖွငျ့ ငွိမျးသတျ…
မြင်းခြံမှာ မီးလောင်နေ၁၃.၂.၂၀၂၀ ညနေ:၅ နာရီ ၄၀ မိနစ်ခန့် မြင်းခြံမြို့ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက် မီးလောင်မှု့မြင်ကွင်း ၁၃.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့၊ (၁၇:၄၅)အချိန်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံမြို့၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိသဖြင့် မြင်းခြံခရိုင်မီးသတ်ဦးစီးမှူးရုံးနှင့် မြင်းခြံမြို့နယ် မီးသတ်စခန်းတို့မှ မီးသတ်ယာဉ်(၁၂)စီး ထွက်ခွာလျက်ရှိပါသည်။ Video- Htin Aung Lin Unicode မွငျးခွံမှာ မီးလောငျနေ၁၃.၂.၂၀၂၀ ညနေ:၅ နာရီ ၄၀ မိနဈခနျ့ မွငျးခွံမွို့ အမှတျ (၅) ရပျကှကျ မီးလောငျမှု့မွငျကှငျး ၁၃.၂.၂၀၂၀ရကျနေ့၊ Read more
“လှတျလပျရေးဖခငျကွီးဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးအတှကျ မွနျမာ့နိုငျငံသားတဈယောကျလို မှေးနဆေု့မှနျကောငျးတောငျးလိုကျတဲ့ Sinon”
မွနျမာ့ပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးကြျော ဖိလဈပိုငျနိုငျငံသား LGBT မျောဒယျ Sinon Lorescaကတော့ ယနမှေ့ာကရြောကျတဲ့ လှတျလပျရေးဖခငျကွီး ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးမှေးနမှေ့ာ မွနျမာ့နိုငျငံသားတဈယောကျလို “True HERO isn’t measured by the size of his strength but by the strength of his heart Happy Birthday To Our Father and Hero ‘’General Aung San ‘’” ဆိုပွီး Read more
အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးကို ခငျပှနျးနဲ့ လကျထပျပေးပွီး ၃ယောကျအတူနမေယျဆိုတဲ့ အမြိုးသမီး ……
လင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့ သူတို့ရဲ့အချစ်တော် မိန်းခလေး တို့ဟာ တလင်တမယားအယူအဆနဲ့ သဝန်တိုတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကို ဂရုမစိုက်ခြင်းအနုပညာဖြင့်တုန့်ပြန်ကာ သုံးယောက်ပေါင်းပီးမိသားစုလေးထူထောင်တော့မယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်။ အသက် ၂၆ နှစ်နဲ့ ၂၈နှစ်အရွယ် Terry and Brittney Stroup ဇနီးမောင်နှံနဲ့ အသက် ၂၇နှစ်အရွယ် Lindsay Schoepf တို့ဟာ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Glendora မြို့မှာ တူတူကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ ဘော်ဒါတွေဖြစ်ပါတယ်။ Brittney နဲ့ Lindsay တို့ဟာ အထက်တန်းကျောင်းမှာ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားခဲ့ကာ ထိုအချိန်တုန်းက Lindsay နဲ့ Terry တို့ဟာ Read more
ပုဂံဘုရားမှာ ညဈညမျးဗီဒီယိုရိုကျကူးခဲ့တဲ့ နိုငျငံခွားသားစုံတှဲ တညျးခိုခဲ့တဲ့ ဟိုတယျကို စုံစမျးနေ
ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားသားစုံတွဲတည်းခိုခဲ့တဲ့ ဟိုတယ်ကို လိုက်လံစုံစမ်းပြီး ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ ပုဂံဘုရားအမှတ်(၁၅၅၄)မှာ ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားသားစုံတွဲတည်းခိုခဲ့တဲ့ ဟိုတယ်ကို လိုက်လံစုံစမ်းနေတယ်လို့ ရှေးဟောင်းသုတေသန ပုဂံဌာနခွဲမှ သိရပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပုဂံယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေ ပရဝုဏ်အတွင်းမှာ ညစ်ညစ်း video ရိုက်သွားတဲ့ စုံတွဲဟာ မည်သူမည်ဝါဆိုတာသိရမှ အရေးယူဆောင်ရွက်လို့ရမှာဖြစ်လို့ ဟိုတယ်တွေမှာ စုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ ရှေးဟောင်းသုတေသန ပုဂံဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်ကျော်က Duwun ကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီး ပုဂံမှာရှိတဲ့ ဟိုတယ်တွေကို နိုင်ငံခြားသားအဝင်အထွက်စာရင်းတွေ စစ်ဆေးနေပြီ။ အခုက Video ပျံ့လာလို့သာသိရတယ်ဆိုပေမယ့် Read more
တကမ္ဘာလုံး တခြားဘယ်နေရာမှာမှ မတွေ့ဖူးသေးတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဂူအောင်းလင်းနို့တွေဆီမှာ တွေ့ထားတယ်လို့ စမစ်ဆိုးနီးယန်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဇီဝဗေဒဌာန ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကု ဆရာဝန် မာ့ခ်ဗာလစ်တီတိုကို ကိုးကားပြီး ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာက ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်မှာ ရေးပါတယ်။ဗာလစ်တီတိုဟာ တိရစ္ဆာန်ကနေ လူကို ကူးစက်နိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို အထူးပြု လေ့လာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လင်းနို့တွေဆီက သွားရေနဲ့ မစင်နမူနာတွေကိုတင် စစ်တမ်းကောက်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်လောက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို Read more
လူတှေ လူစိတျပြောကျကုနျကွပွီလား…. လူသားဖောကျဂိုဏျ အားဖမျးဆီး ….
လူတွေ လူစိတ်ပျောက်ကုန်ကြပြီလား..ဘေးဆိုး ကပ်ဆိုးတွေ ..ရောဂါဆိုးတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတာလဲမပြောနဲ့လေ ဒီလို အဖြစ်တွေ ဘယ်လောက်များများ ဖြစ်နေကြပြီလဲ .. 13.02.2020 Bangkok ထိုင်းဘန်​​ကောာက်​မြို့အတွင်းဒီက​နေ့အထူး​ထောက်​လှန်း​ရေးရဲတပ်​ဖွဲ့မှ လူသားများသား​ဖောက်​ပြီး​မွေးလာ​သောခ​လေးငယ်​များ၏အင်္ဂါအစိတ်​အပိုင်းတချိုးကိုခွဲစိတ်​ယူကာ ​ရောင်းချ​နေကြသည့်​ – ဂိုဏ်းကိုသိရ၍ အငှါးကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​အမျိုးသ္မီးများကို ထား​သောအိမ်​တ​ဆောင်​ထဲကိုဝင်​​ရောက်​ဖမ်းဆီးကြောင်းသိရပါသည်​ အမျိုးသ္မီးတဦး၏အငှါးကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ခမှာ ခ​လေးငယ်​တ​ယောက်​​အောင်​မြင်​စွာ​မွေးဖွားနိုင်​လျင်​ ဘတ်​​ငွေ ​လေးသိန်းမှငါးသိန်းအထိရ​ကြောင်းသိရပါသည်​ Credit to KHM Rakhita news Unicode လူသား​ဖောကျ​ဂိုဏျ​အားဖမျးဆီး လူတှေ လူစိတျပြောကျကုနျကွပွီလား..ဘေးဆိုး ကပျဆိုးတှေ ..ရောဂါဆိုးတှေ ဖွဈကုနျကွတာလဲမပွောနဲ့လေ ဒီလို အဖွဈတှေ ဘယျလောကျမြားမြား ဖွဈနကွေပွီလဲ .. Read more
ပရိသတျတှေ ဝဖေနျနတေဲ့ အသကျ ၂၀ကြျော ဇာတျကောငျနရောမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျဖွဈတဲ့အပျေါ ဖွရှေငျးခဲ့တဲ့ မခိုငျလေး
မွနျမာပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မငျးသမီးခြော ခိုငျသငျးကွညျက ပရိသတျတှကေ မခိုငျလေးလို့ ခဈြစနိုးနဲ့ ချေါကွပွီး ဘဝကို ပြျောပြျောနတေတျတဲ့ သူတဈယောကျပါ။ ဝါရငျ့ သရုပျဆောငျတဈဦးဖွဈသလို လကျရှိအခြိနျထိ ပရိသတျအခိုငျအမာနဲ့ အနုပညာလောကထဲမှာ ရပျတညျနတေဲ့ မငျးသမီးတဈဦးဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ မခိုငျလေးက ပရိသတျတှအေကွိုကျ ရုပျရှငျဇာတျကားတှကေို ရိုကျကူးလကျြရှိပွီး ဇာတျကောငျနဲ့ အမွဲလိုကျဖကျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ သူတဈဦးဆိုတာ ပွောစရာတောငျလိုမယျမထငျပါဘူး။ မခိုငျလေးက အသကျတှသော တဖွညျးဖွညျးကွီးလာတယျ ငယျရှယျနုပြိုနမှေုက မပြောကျပကျြသှားတာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားကခြွငျးကို ခံနရေတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျပါ။ ဒါကွောငျ့ “ Read more
လမျးပျေါမှာ ဖရဲသီးရောငျးနရေတဲ့အဘှားကို ကာလဒါနလေးလုပျလိုကျတဲ့ မဦေး သာဓုပါ မဦေးရေ
မွနျမာပွညျရဲ့ LGBT စုံတှဲတှထေဲမှာ ပရိသတျတှအေခဈြခငျခံရဆုံး စုံတှဲလေးက ဟနျလငျးနဲ့ မဦေးတို့ပါပဲ။ နှဈယောကျသားလကျတှဲ လာတဲ့သကျတမျးဟာလညျး လေးနှဈနီးပါးရှိခဲ့ပွီဖွဈပွီး လကျရှိအခြိနျထိလညျး အဆငျပွသောယာတဲ့ အခဈြကမ်ဘာလေးကို တညျဆောကျ ထားနိုငျဆဲပါပဲ။ မဦေးက မိတျကပျပွငျ ဟနျလငျးက ပနျးအလှဆငျနဲ့ နှဈယောကျသားက လူတှတေငျမက လုပျငနျးတှမှောပါ လိုကျဖကျ ညီလှနျးနခေဲ့ပါတယျ။ သာဘာတရားလညျးကိုငျးရှိုငျးပွီး နှဈယောကျအတူလညျး အလှူလေးတှေ မကွာခဏဆိုသလို လုပျတတျပါသေးတယျ။ ဒီနလေ့ညျး အသကျအရှယျအိုမငျးနတေဲ့ အဘှားတဈယောကျ လမျးဘေးမှာ ဖရဲသီးရောငျးနရေတာကိုမွငျတော့ မဦေးတဈယောကျ စိတျမကောငျး ဖွဈသှားပုံပါပဲ။ အဘှားရဲ့ဖရဲသီးတှအေားလုံးကိုဝယျပွီး သငျတနျးသူတှကေို ပွနျလညျကြှေးမှေးခဲ့ပါတယျ။ Read more
ဗိုလျခြုပျမှေးနအေ့ထိမျးအမှတျအဖွဈ ပရိသတျတှကေို ပဲပွုတျနဲ့နံပွားကြှေးမှေးခဲ့တဲ့ ပိုငျဖွိုးသုတို့အဖှဲ့သားတှေ
” အခဈြဖွငျ့လှမျးစေ ” ဇာတျကားရဲ့ အဖှဲ့သားတှအေားလုံးစုပေါငျးပွီး ဒီနေ့ ဖဖေျောဝါရီ (၁၃)၊ ဗိုလျခြုပျမှေးနအေ့မှတျတရအဖွဈနဲ့ ပရိသတျတှကေို ပဲပွုတျနဲ့ နံပွားကြှေးမှေးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ လှတျလပျရေးဖခငျကွီးရဲ့ မှေးနရေ့ောကျတိုငျး မွနျမာပွညျသူပွညျသား တှဟော ဗိုလျခြုပျရဲ့ ” ကွညျရေ ပဲပွုတျနဲ့ နံပွားရရငျ စားခငျြတယျကှာ ” ဆိုတဲ့ စကားလေးကို အစှဲပွုပွီး ပဲပွုတျနံပွားအလှူပွုကွစမွဲ ပါပဲ။ ရုံတငျပွသနပွေီဖွဈတဲ့ ဒီဇာတျကားလေးမှာ ပိုငျဖွိုးသုနဲ့ ဒေါငျးတို့က အဓိပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ပွီး ပရိသတျတှရေဲ့စိတျနှလုံးကို အပွညျ့ အဝဆှဲဆောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဇာတျရုပျတိုငျးကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဖျောနိုငျတဲ့ Read more